Ewepụtara ụdị ọhụrụ nke Final Cut Pro X na isi okwu taa | Esi m mac
Ewepụtara ụdị ọhụrụ nke Final Cut Pro X na isi okwu taa
Nkeji ole na ole gara aga gosipụtara ngosipụta ọhụrụ nke Final Cut Pro X. Ihe mbụ nke pụtara ìhè bụ ọhụụ ọhụrụ karịa na sistemụ arụmọrụ Mac kachasị ọhụrụ: Mac OS X Capitan na MacOS Sierra. Nke a na-echekwa usoro nke ngalaba: ọbá ​​akwụkwọ, onye na-ekiri ya na usoro iheomume, mana ọ dị ntakịrị ntakịrị ma nụchaa. Ọ na-ekwe nkwa ahụmịhe pụrụ iche.
Mana akụkụ nke ga-agbanwe iji ya eme ihe bụ mmekọrịta zuru oke na Aka Ogwe. Na ngosi ahụ, a hapụrụ anyị ka anyị meghee ọnụ iji hụ ntụgharị nke ọ na-enye ohere, n'ihi na mmetụta a ga-arụ ọrụ tradpad na ogwe osisi n'otu oge.
Anyị nwere ike idowe onwe anyị na clip ma site na mmanya na-eme ka clip ahụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ gbatịa ya, mee ya edozi, belata ihe osise, gbanwee olu mkpirisi, ma ọ bụ dezie agba. Nke a abụrụla ihe nlele, mana ọ ga-ezobe ọrụ zoro ezo dịka ndị enyere.
Ihe anyị nwere doro anya bụ na ọ ga-akara akara tupu na mgbe edezi vidiyo, na-enye ohere ịbawanye ụba na ojiji ya.
Naanị ihe fọdụrụ iji hụ ma ụdị a ọ ga-adị maka ndị otu ugbu a. Ka anyị nwee olileanya. N'ọnọdụ ọ bụla, naanị maka ọrụ a ọ bara uru iche echiche banyere ịgbanwe ngwaọrụ anyị, iji ya mee ihe ma nye ya nnukwu ojiji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ewepụtara ụdị ọhụrụ nke Final Cut Pro X na isi okwu taa
Nke a bụ Touch Bar nke ọhụrụ MacBook Pro
Ọhụrụ MacBook Pros adịlarị n'etiti anyị